I-Cyprus ihlutha abasemzini abangama-45 kwiipaspoti zabo ze-Golden Visa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeCyprus Breaking » I-Cyprus ihlutha abasemzini abangama-45 kwiipaspoti zabo ze-Golden Visa
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zeCyprus Breaking • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-Cyprus ihlutha abasemzini abangama-45 kwiipasipoti zabo ze-Golden Visa.
IKhomishini yaseYurophu igxeke iSipro ngokunika ezi pasipoti, isithi "amaxabiso aseYurophu awathengiswa," kwaye ityhola inkqubo "yokuthengisa ubumi baseYurophu ngenzuzo yemali."
ISipro ithathe isigqibo sokususa ubumi baseCypriot kubatyali-39 kunye namalungu ama-6 eentsapho zabo.
ISipro ikwaphanda amanye amatyala amathandathu, kwaye ubeke amanye angama-47 phantsi koqwalaselo oluqhubekayo.
ICyprus yavuma ngo-Okthobha kunyaka ophelileyo ukuba iphelise isikimu sayo seVisa yeGolide ngo-Novemba 1, 2020.
Amagosa aseburhulumenteni baseCyprus athe namhlanje bazakukhumbula ngokusesikweni i-'Gold Visa 'yokufumana imali yokundwendwela evela kubantu bamanye amazwe abangama-39 abafumene ubumi baseCypriot phantsi kwesikimu sotyalo-mali esilihlazo. Abathandathu babaxhomekeke kubo baya kuhluthwa iipasipoti zabo zaseCyprus.
Sayiprasi IBhunga laBaphathiswa libhengeze isigqibo sokususa "ubumi baseCypriot kubatyali-mali abangama-39 kunye namalungu ama-6 eentsapho zabo," ngaphandle kokuchaza amagama abantu abachaphazelekayo nangona kunjalo.
Urhulumente ukwathi uphonononga amanye amatyala obuqhetseba amathandathu, kwaye ubeke amanye angama-47 “phantsi koqwalaselo oluqhubekayo… ngokwenkqubo ebonelelweyo.”
ISipro yavuma ngo-Okthobha kunyaka ophelileyo ukuba iphele Isikimu seVisa segolidee ngoNovemba 1, 2020, eyayivumele abantu bamanye amazwe ukuba bafumane amalungelo okuhlala kunye nokuba ngabemi njengembuyekezo yokutyala izigidi elizweni. Ukulungela, abantu kuya kufuneka, ubuncinci, batyale i-2 yezigidi zeedola ($ 2.43 yezigidi) kwiipropathi zaseCyprus ngaphezulu komnikelo kwingxowa-mali yophando lukarhulumente.
Iskimu, sibizwa ngokuba imali-ubummi, kucingelwa ukuba inyuse i-7 yezigidigidi zeerandi (i-8.12 yezigidigidi zeedola) ngaphambi kokuba urhulumente ayamkele into yokuba sele evuleleke “ekuphatheni gadalala.”
Bamalunga nama-7,000 abantu ekucingelwa ukuba bafumene ubumi phantsi kwesi sikimu ngaphambi kokuba sivale, urhulumente waqesha ikhomishini emva koko yafumanisa ukuba ngaphezulu kwama-53% abo bafumana iipaspoti ngale ndlela benze njalo ngokungekho mthethweni.
Nje ukuba umntu afumane ipasipoti yaseCypriot, baya kuba nakho ukuhamba, basebenze, kwaye bahlale nakweliphi na elinye ilizwe elingamalungu e-EU. Ngaphambili, iKhomishini yaseYurophu yagxeka Sayiprasi ngokunikezela ezi ncwadana zokundwendwela, besithi "amaxabiso aseYurophu awathengiswa," kwaye etyhola iskim "sokuthengisa ubumi baseYurophu ngenzuzo yemali."